Hogaamiyaha Kooxda Shaydaanka Caabuda Ee Dunida Oo Imaratku U Diideen Inuu Galo Dalkiisa Dibna Loogu Celiyay +SAWIRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Hogaamiyaha Kooxda Shaydaanka Caabuda Ee Dunida Oo Imaratku U Diideen Inuu Galo Dalkiisa Dibna Loogu Celiyay +SAWIRO
Masuuliyiinta Madaarka caalamig ah ee magaalada Dubai ayaa cadeeyay Mastaafurinta Rolf Buchholz oo ah hogaamiyaha, kooxaha Shaydaanka caabuda ee dunida, waxaanu maamulka Madaarku talaabada loogu diiday in ninkaasi galo dalka Imaaraatka carabta ku tilmaameen mid la xidhiidha dhaqanka iyo diinta dalkaas oo uu ninkani lidi ku yahay.
Rolf Buchholz oo shan boqol oo ribidh wajiga iyo jidhkiisa ku dhejiyay, isla markaana samaystay laba gees oo foodiisa ku yaala, ayaa isaga iyo taageerayaashiisu cabuudaan Ibliis ama Shaydaanka, waxaanu ku doodaa inuu arkay Shaydaanka oo uu isku ekaysiiyay muuqaalkii uu ku arkay.
Waxyaabaha ay rumaysan yihiin kooxdaasi iyo jiritaankooda waxa intaba ay mamnuuc ka yihiin dunida inteeda badan, waxaanu sida la sheegay doonayay inuu Dubai ku qabsado xus ay shaydaanka ku caabudayaan isaga iyo qaar ka mid ah taageerayaashiisa oo ku balansanaa, laakiin waxa iska hor taagay inuu dalkaas galo maamulka Madaarka Dubai.
Ninkan Shaydaan Caabudka ah ayaa markii dib looga celiyay dalka Imaaratka waxa sida wakaaladaha wararku ku warameen uu bogiisa twitter-ka dhigay, qoraal uu kaga cabanayo talaabada laga qaaday iyo diidmada la isaga hor taagay inuu Dubai galo.
Sida uu sheegay waxa Imaratku ka baqdeen inuu sixro ama uu waxyaabo khal khalin ah ku sameeyo, laakiin maamulka madaarka Dubai oo iyagu ka hadlay go’aanka ninkaas loogu diiday inuu galo dalka Imaaratka ayaa sheegay in wax kasta oo lid ku ah dhaqanka iyo diinta dalkooda aanay u ogolayn inuu gudaha u galo waddankooda.